Friday February 24, 2017 - 22:14:29 in Wararka by Xarunta Dhexe
Waxaad moodaa in soomaalidi ay bilaabayaan fahamka iyo macnaha uu leeyahay isqadarinta, weyneynta walaalka iyo in wadanka kawada dhexeeyo, oo cid weliba masuuliyad ka saarantahay, isxisaabintana ay tahay isasixid!
Soomaalida kalana waxaan ka sugnaa waaintaa, si wadanka u dhismo, qofki masuuliyadiisa ka soo bixiwaayana leys dhaafiyaa laakin aan laga hordhicin isagoon hawlgelinba..!
Soomaalida, waxaan Ilaah uga baryaaya iney noqdaan, kuwa ku xaq dhowra qofka waxqabadkiisa, iyagana iney mid yihiin tusa, oo wixi ka xumaado ay kawada xumaadeen, wixi u hagaagana sidookale ay u wada hagaageyn.
Xukun la rido markasta waa kii dambeeya haddiisa la soo hormariyo iyadoo muuqa qofka iyo qabiilkiisa sal looga dhigaayo....! Waa waali dhaqan umadeed qeyb libaax ku yeelatay!